Fanaka Classic, Mpanamboatra fandriana sy Sofa Classic | James Bond
James Bond Furniture dia nifantoka tamin'ny fanaka mahazatra mahazatra nandritra ny 18 taona.
Fanaka Classic Luxury
Kabinetra Tv Classic
Latabatra mahazatra fandriana
Latabatra fisakafoana klasika
Seza fisakafoana klasika
Seza fialamboly klasika
Mifantoha amin'ny fanaka mahazatra mahazatra
Ny safidy tsara indrindra ho an'ny olona mahomby
Ny tanjonay dia ny hanome fahafaham-po ny mpanjifanay amin'ny kalitao avo lenta sy azo itokisana mba hahazoana antoka fa ny mpanjifa tsirairay dia afaka mahazo aina sy matoky ny entanay amin'ny fampiharana azy. Manana endri-javatra maro izy ireo izay miantoka ny fanamafisam-peo sy ny fampiharana.
Fanaka sofa mahazatra James Bond 14k volamena sy hazo matevina A2820 volontsôkôlà
Ny fanaka James Bond dia mifantoka amin'ny fanaka klasika avo lenta ary mamokatra set sofa avo lenta sy raitra. Iray amin'ireo marika fanaka lafo vidy indrindra an'i James Bond ity set sofa lafo vidy ity ary ampiasain'ny olo-malaza maro, olo-malaza ary aristokraty. Satria tena mahavariana, tena mirentirenty ihany koa, dia mety ho tena tsara hanehoana ny maha-izy azy sy ny satan'ny tompony.Ny fanaka James Bond dia amidy any amin'ny firenena 60 mahery any ampitan-dranomasina, niasa mafy izahay, manantena fa betsaka kokoa ny mpampiasa manerana an'izao tontolo izao afaka mahatsapa ny fanaka mahazatra James Bond novokarina tamim-pitandremana.
Fanaka sofa klasika 14k volamena sy volamena hazo mivaingana&Champagne A2819 James Bond
DescriptionNy fanaka sofa James Bond Classic 14k volamena syvolamena hazo mafy &champagne A2819DETAIL ny vokatraFitaovana: Frenchbeech\_Leather\_14kgold Fitaovana seza: hoditra Loko hoditra: Maivana volontany Loko hazo: Champagne
Famolavolana fandriana James Bond Classic volamena 14k sy hazo matevina Velvet manga JP644
James Bond Classic latabatra fisakafoana boribory elektrika sy hazo mafy misy loko vita amin'ny piano Brown JF522
DescriptionVolamena mivolontsôkôlà klasika sy hazo mivaingana misy resin-pianoloko elektrika boribory misakafo afakaDETAIL ny vokatraFitaovana: Beech frantsayHabe: 220W×220D×76H 300W×300D×76H 380W×380D×76HLoko hazo: BROWN
Furniture sofa klasika maoderina 14k volamena sy hazo matevina A2803
James Bond fanaka maoderina maoderina 14k volamena sy hazo matevina A2803.
Fanaka sofa mahazatra 14k volamena sy hazo mafy fotsy / maitso lalina / volontany / JF508
James Bond fanaka sofa mahazatra 14k volamena sy hazo mafy fotsy / maitso lalina / volontany / JF508.
Ny sofina klasika dia manamboatra endrika volamena 14k volamena sy hazo matevina JF508
Sofa mahazatra James Bond dia manamboatra endrika volamena 14k sy hazo matevina JF508.
Ny sofa James Bond Classic dia mamolavola volamena 14k ary manga manga A2825
James Bond Furniture dia nifantoka tamin'ny fanaka mahazatra avo lenta avo lenta nandritra ny 18 taona. Mpanjifa maro no milaza fa ny fanaka James Bond dia manamboatra fanaka mahazatra izay mitovy amin'ny fanaka mahazatra italiana. Eny, mandefa ny ekipa mpamokatra sy ny ekipan'ny famolavolana any Italia isan-taona izahay mba hianatra ny teknolojia famokarana sy ny foto-kevitry ny famolavolana ny fanaka klasika italiana tsara indrindra, mba hahafahan'ny fanaka mahazatra tsara indrindra entina amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.Ny setroka sofa mahazatra anay dia malaza be satria voakarakara tsara amin'ny antsipiriany rehetra, manolotra fahatsapana malefaka, fahatsapana mirentirenty ary fahatsapana mahazatra.
James Bond Furniture dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanaka mahazatra mahazatra mandritra ny 18 taona, ary amidy amin'ny firenena 52 manerana izao tontolo izao ny vokatra. Mifidiana amim-pitandremana fitaovana avo lenta, miara-miasa amin'ny ekipa mpamorona za-draharaha sy ekipa mpamokatra, ary ento any Shina ny asa tanana italiana tena tsara.
Nahavita tetikasa miavaka maromaro
1. Tetikasan'ny fianakavian'ny mpanjaka Maleziana
2. Tetikasan’ny Lapan’ny Filoham-pirenena aty Afrika
3. Tetikasa Hotely kintana enina any Dubai
4. Tetikasan'ny orinasa mpanamboatra malaza any Dubai
5. Tetikasa Villa mpihira malaza
6. Tetikasa maherin'ny 100.000, toy ny tetikasa villa kintana sarimihetsika malaza
Tetik'asa mpanjifa holandey - fanaka mahazatra avy amin'ny James Bond Furniture
Ny sofa mahazatra nofidin'ny mpanjifa holandey no fomba lafo indrindra amin'ny James Bond Furniture. Nivarotra nandritra ny 18 taona, ary ny foto-kevitry ny famolavolana azy dia avy amin'ny rojo an'ilay vehivavy tsara tarehy. Ny endrika dia kanto sy matsiro. Ampifandraisina amin'ny toppings italiana premium nofonosina hoditr'omby, tena sarobidy, safidy tsara!Ny mpanjifa holandey dia nampiasa latabatra haingon-trano roa, izay afaka milalao vokatra haingon-trano tena tsara, ka ny toerana manokana dia toa manana atmosfera!
Tetik'asa mpanjifa Shanghai - fanaka mahazatra avo lenta avy amin'ny fanaka James Bond
Ny trano vaovaon'ny mpanjifa Shanghai dia vokatra avy amin'ny andian-dahatsoratra marika James Bond. Ny akanjon'ny sofa mahazatra manga mirentirenty no ampiasaina, ary ny seza fisakafoana mahazatra mitovy loko dia mifanandrify. Ny fandriana mahazatra ao amin'ny efitrano fatoriana dia tena classy ihany koa.James Bond fanaka no safidy ny olona mahomby, avo lenta, mahazatra fanaka amin`ny fomba, dia afaka mampitombo be ny rivo-piainana ao an-trano sy ny fahaiza-manao sy ny zon`ny tompony!
Tranon-trano sinoa britanika avo lenta-James Bond Classic Furniture ambongadiny-
Ny fanaka klasika avo lenta, ny fanaka mahazatra James Bond dia solontena. Izahay dia manolo-tena amin'ny famoronana fanaka klasika avo lenta, maharitra, fahafaham-po amin'ny mpanjifa, no fikatsahanay. Avy amin'ny fitaovana avo lenta ka hatramin'ny asa vita tsara, dia manana fenitra hentitra isika, ka ny fanaka mahazatra an'i James Bond dia vita amin'ny entana avo lenta.
Mpanamboatra James Bond Large Villa Project matihanina
Mpanamboatra James Bond Large Villa Project matihanina. James Bond fanaka klasika dia manolo-tena amin'ny famoronana fanaka klasika avo lenta. Nanafatra akora izahay ary nampiditra teknika famokarana italiana. Ho fanampin'izany, dia nanakarama tompo mpanao asa tanana maromaro manana traikefa 10-20 taona izahay mba hampiasa teknika fanaovana sokitra tanana madio mba hanehoana ny hasarobidin'ny fanaka mahazatra. Ny fanaka mahazatra James Bond dia nahavita tetik'asa villa maromaro, tetik'asa hotely ary tetik'asa trano. Nanatsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy mpanjifa izahay.
James Bond Furniture dia naorina tamin'ny taona 2003 tao amin'ny toeram-pamokarana fanaka nasionaly malaza - tanàna LongJiang, distrikan'i Shunde, tanàna foshan, mivelatra mihoatra ny 50,000 metatra toradroa, izay famokarana, fivarotana an-trano avo lenta Eoropeana trano fandroana klasika. , latabatra, tea table andian-dahatsoratra vokatra ny orinasa tsy miankina. Nandritra ny 18 taona, James Bond Furniture dia mifikitra amin'ny fenitra etika tsy miova, manolo-tena amin'ny fananganana ny fenitra, ny kolontsaina orinasa mangarahara ary ny modely fampandrosoana maharitra, ary ny fahazoana fankasitrahana avy amin'ny indostria, dia nahazo ny "Industria maivana 10 ambony any Shina", "Fifanarahana nasionaly ary orinasa fampindramam-bola", "faritany Guangdong nandritra ny 15 taona nifanesy mba hanarahana ny fifanarahana sy ny orinasa fampindramam-bola" "Top folo marika eoropeana sy amerikana amin'ny fanaka sinoa" anaram-boninahitra.
James Bond Furniture dia avy any Italia miaraka amin'ny ra mendri-kaja, mifikitra amin'ny fomban-drazana, fifantenana henjana amin'ny fitaovana, voadio, mampiasa fomba famokarana italiana madio, mba hahazoana antoka ny kalitao tsara. Avy amin'ny veneer hazo voajanahary madio ka hatramin'ny fandokoana piano mamirapiratra sy mamirapiratra, tontonana sarobidy sy tsy fahita firy...Tsy an-kanavaka ny aingam-panahin'ny union vogue sy ny asa tanana nentim-paharazana, avelao ny fanaka ho vatosoa haingo mandravaka ny trano. Ny mpanao asa tanana James Bond dia mandova ny zavakanto sy ny lova ara-kolotsaina an-jatony taona maro, miteraka hafanam-po sy aingam-panahy amin'ny famoronana ara-javakanto, ary miezaka mamorona sanganasa tonga lafatra indrindra.
James Bond Furniture dia mitondra hatsarana ao an-tranonao
Ny hafatrao tsirairay dia voninahitra
Fanaka mahazatra mahazatra
Talen'ny varotra ao amin'ny Amir Chen
Adiresy: JAMES BOND FURNITURE, mifanohitra amin'ny tobin-tsolika Lihai, tanàna longjiang, distrikan'i Shunde, Foshan, Guangdong, Sina.